Cape - isosha ngalinye, kanye nezinye izinhlobo kwamatende
Ngokwesiko, kwakukhona lesi elementi umfaniswano wezempi Russian ngekhulu le-19 - ku 1882 izimpawulo wawuyingxenye imishini njengoba sibaluli esidingekayo. Yilokho nje iyunithi ngaleso sikhathi akuyona sifana izingcezu yesimanje engasindi ngoseyili: Kwathi ngezigxobo lokhuni nezinsika, lapho amasosha okwakumelwe bafake greatcoat netende esindayo futhi bulky, iphuma phakathi roller. Noma kunjalo, ibutho lezempi lase lilungele lokhu - ekugcineni izimo mkhakha amakhanda abo ayikwazanga cwilisa emvuleni. Umqondo ekulondolozweni ezomile iyunifomu, bawa izinhloko enjalo kakade 1910 unxantathu ngendwangu ngokusemthethweni wathola isimo "izimpawulo isosha" futhi wasetshenziswa ngesikhathi yamathanga.
Kusukela eminyakeni yokuqala iCape yadalwa ngezinsuku imibala okhakhi, ukugqiba indawo nesosha uphumule. Amasosha aseJalimane Second Umhlaba Umbala izimpawulo kwaba ezimbili - by ukungcola "yethu" ngaphansi "ekhaya". Kwakunokwenzeka ukubophela nomunye ematendeni ezine futhi uthole eyodwa enkulu, ephezulu grade kubantu eziningana. Yilokho nje kuphela "kodwa": kusukela eminyakeni yokuqala kakhulu - okungukuthi, kusukela ngo-1910, ukushintsha design wetende akekho ukhathazwa - futhi muffle abafana bethu nesibindi iDemo isembatho engaqinile.
Cape Modern futhi izindlela zayo
Namuhla izimpawulo unamahlangothi ka 180cm ngendwangu futhi izintambo ukoma hood futhi isiphuku uqobo. It kungenziwa igqoke ngemuva emuva, futhi ngesimo ezisonga, kodwa izinkinobho esikhundleni labo nezikhonkwane efanayo lokhuni. Uma setter ezikhonjwe yize ubude 20cm ezinhlangothini etendeni - amasosha Russian mhlawumbe futhi kwakungeke kudingeke ukudweba emilenzeni lapho ziphumule.
Ngosizo wezempi izimpawulo izikhali ezihlanzekile, uyisebenzisa njengendlela udoti, futhi ukudubula, kanye. Yena idluliselwe amaqabunga ngesikhathi wokuhlanza, yena zigutshuzelwe bunks ezindaweni zokukhosela insimu, njll Ngenxa yokusebenza kwalo ngezindlela eziningi futhi elikhanyayo enkazimulweni izimpawulo kwakuqala ukwanda phakathi ngabalingisi isitayela lempi - kukhona labo abakhetha aphephele imikhankaso kuphela wakhe. Ingabe elula - Ngeke siphikisane, kodwa abantu olandelanayo ngaphezulu kulingane kahle i etendeni abavamile double. Manje ekhiqizwa inqwaba super imiklamo lula futhi izinto - kuze aluminium ne-fiberglass, zisonga ibe tube ukuthi zingafakwa in a ubhaka. Ngokuphathelene amafomu - lapha yilapho ukuzulazula: ethandwa oluyingungu, kodwa okwaziyo futhi side unxande abantu ubude.
Indlela yokwenza itende ngezandla zakhe?
SiGaba labo ikakhulukazi enikelwe ezokuvakasha. Ezezindlu zingenziwa kwamakamelo eziyisithupha ibhayisikili emgwaqweni, polyethylene abavamile futhi oseyili. Lezi ematendeni inflatable zixhunywe hhayi ngomhla ka-rock onesigqi esinamandla, ezisindayo-duty iraba tube.
Ukuphuca ekamelweni 4 emhlabeni pin kusuka decimeter ukuthola tube ka 120cm ngamunye ukuzinweba, ukusithatha 60cm ngaphezulu kusukela emakamelweni asele. Kuyadingeka ukunamathisela ikhamera unamathelise kuphelile. Manje sixoxa Unamekwe nge ngendwangu, kuze kube semikhawulweni ububanzi iluphu pridelyvaya kuze 5 cm. ingono abasele ngaphandle umjovo emoyeni ekamelweni.
Thina usika isiqeshana ngendwangu kumbuthano futhi thunga ikhava - lokhu kuzoba phansi, wasusa itende lakhe ngesikhathi esifanayo obandayo Racks. Yonke into manje isiyinhle isisitho selanga endlini ilungele eyenziwe polyethylene, iglu "Moment" izigxobo futhi ezengeziwe ithungwe inayiloni intambo. Lokhu etendeni ukala esingaphansi 2kg, futhi inqubo yokufaka ngeke kuthathe imizuzu engaphezu kuka-10.
Cuba libuyekeza mayelana ukuphumula
Amanzi epaki "Isikhumulo" e Brovary: izibuyekezo zamakhasimende kanye nencazelo eziyinkimbinkimbi
Izikhangibavakashi Cherdyn (Perm)
Izikhungo reception Glopart.ru izinkokhelo osheshayo (ukubuyekezwa)
Andrei Dellos: Biography, empilweni yakho, umndeni
I esiyingozi ukungafakwa udonga phambi sangasese?
Bazarov futhi Kirsanov ingxabano: ngubani kwesokudla?
Amaqiniso athembeke kakhulu ngewayini elidala kakhulu emhlabeni
School emakilasini emakhoneni ngezandla
Njengoba semolina upende diy? Zonke izindlela yokukhiqiza okunye, isihlabathi enombala